Banyere Anyị - Hebei Zifeng New Energy Technology Co., Ltd.
Ngwongwo ụlọ nke ụlọ
Ihe eji eme ncha isi
Ogwe aka nchara
Ndị na -ebelata ihe nchara
Flanges nke nchara Carbon
Nkedo ígwè valves
Ahịa Nchara na Sockets
Mkpuchi olulu mmiri
HEBEI ZIFENG Ọhụrụ
HEBEI ZIFENG NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe zuru oke, anyị nwere ngwaahịa dị iche iche ma bụrụ ọkachamara na nrụpụta, mbubata & mbupụ azụmahịa nke ngwaahịa dị elu.
ZiFeng na -eme ihe kacha mma mgbe niile iwulite ngwaahịa anyị ka ọ bụrụ ụlọ ọrụ na -eduga ụwa site na itinye ego siri ike na ọrụ R&D na nkwenkwe na mma kacha mma bụ ntọala siri ike nke nlanarị azụmaahịa na afọ ojuju ndị ahịa.
ZiFeng anọwo n'ahịrị azụmaahịa a ọtụtụ afọ ma nwee ọkwá dị elu nke mba ụwa. teknụzụ agbakwunyere na ahụmịhe, ngwaahịa anyị dị ezigbo mma ma ndị ahịa anyị na -ewere ụlọ ọrụ anyị dị ka ndị kacha atụkwasị obi.
ZiFeng nwere mpako ijere ọtụtụ azụmaahịa gburugburu ụwa ozi. Anyị na -agba mbọ hụ na ị nwetara ihe kachasị mma ebe ahụ ka ị nwee ike nweta ọrụ gị ngwa ngwa yana nke ọma. Ebumnuche anyị bụ ịkwado gị n'inweta ihe ịga nke ọma site n'inye ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya na ọnụahịa kachasị asọmpi anyị nwere ike ịnye. A ga -emezu echiche gị na echiche gị .Anyị ghọtara mkpa gị n'ezie. Site na ọrụ anyị ngwa ngwa yana nke zuru oke, ị gaghị echegbu onwe gị maka igbu oge ma ọ bụ enweghị akụrụngwa.
Ndị ọrụ anyị sitere nzụlite dị iche iche, ha nwere ahụmịhe ọtụtụ afọ. Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na ngwaahịa anyị ọ bụla ma ọ bụ chọọ ịtụle usoro omenala, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị. Anyị na -atụ anya ịme mmekọrịta azụmaahịa na -aga nke ọma na ndị ahịa ọhụrụ gburugburu ụwa n'ọdịnihu dị nso.
Anyị ụlọ ọrụ nwere ebu ogbako, mgbatị ogbako, ngwaike ogbako na nzukọ workshop.Our ụlọ ọrụ na -agbalị imezu ahịa 'chọrọ. "Dabere na mma, ọganihu na ezi obi" bụ anyị ụkpụrụ. Na elu
Maka mbupụ, ngwaahịa ndị dị na ngwaike na ngwaahịa ihe owuwu, ọkachasị ngwaahịa pipeline, gụnyere ngwa nchara nchara nchara. ihe nchara nchara mana. Ọkwa nchara na sọks. Flanges adịgboroja. Ụdị valvụ dị iche iche gụnyere valvụ igwe anaghị agba nchara. Valves Ọnụ Ụzọ .má. Ụkpụrụ Nrubeisi. Lelee valvụ. Ụkpụrụ Globe. valvụ hydrant valvụ na nkedo ígwè na nchara, ụdị clamps dị iche iche wdg.
Banyere mbubata, anyị nwere ahụmịhe ọtụtụ afọ, dịka ngwaahịa akpụkpọ anụ sitere na Germany, Holland, Germany, wdg. Na ngwaahịa ndị ọzọ dị ka mmanụ oriri, mmanya na -acha ọbara ọbara na ngwaahịa usoro. Ka amara na anyị bụ naanị ụlọ ọrụ abụọ nwere ikikere maka mbubata mmanya uhie.
Ọbụnadị maka nrụpụta ma ọ bụ azụmaahịa I/E, "Lekwasị anya n'ịdị mma na ịnye ndị ahịa ọ bụla ọrụ afọ ojuju" bụ ọrụ anyị na -arụ. Na -atụ anya ka gị na gị nwee mmekọrịta azụmaahịa ka ị nwee ike irite uru n'ọdịnihu dị nso.
L/C, T/T, D/P, Paypal, gram gram, Western Union, Ndị ọzọ
Oge kacha elu na -eduga oge
Oge nkwụsị oge
Mpịakọta Ahịa Kwa Afọ (Nde US $)
US $ 5 Nde - US $ 10 Nde.
Mpịakọta Ịzụta Kwa Afọ (Nde US $)
US $ 1 Nde - US $ 2.5 Nde.
Africa, America, Asia, Caribbean, East Europe, Europe, Middle East, North Europe, Oceania, Ahịa ndị ọzọ, West Europe, Worldwide.
Port kacha nso
Ọnọdụ mbubata & Mbupụ
Nwee ikikere mbupụ
Nọmba Ikikere mbupụ
Aha ụlọ ọrụ mbupụ
Mba nke ndị ọrụ QC
Ogo ụlọ ọrụ (Sq.meters)
A na -enye ọrụ OEM
ADDRESRm501, Shenglun Building, Heping West Road, Shijiazhuang, Hebei, China